एक चिन्तन ः मृत्युु जिज्ञासा
Post Date 2021-07-22 14:17:10
जब मृत्युको बारेमा सोच्न लाग्छु , तब कैयौं प्रश्नहरु र जिज्ञासाहरु मेरो मस्तिष्कका कुदन थाल्छ। सन्तुष्टिको उत्तर वा समाधान देख्तिन । जिवन जो बित्यो अथवा जो अहिले बितिरहेको त्यो त लगभग बुझें नै जस्तो लाग्छ । अहिले सम्म खासै केही छैन जस्तो लागि रहेछ । उहि पुनरावृत्ति नै छ। दुःख बढी छ सुख कम । यस्मा लगातार मन रमाउन सक्तैन । मेरो उमेरको उत्तरार्धको अवस्थाले होला या सायद कोरोना कहरको समाचारहरुको कारणले होला कुनै अप्रत्याशित कुनै भीषण बिपत्ति आउँनेवाला छ जस्तो लाग्छ । मृत्यु बारे सोच्न थाल्छ । जिवनमा मृत्युु एकदिन आउनु त अनिवार्य नै छ । आखिर जे सुकै भएर होस ।
हिन्दू धर्म दर्शनको पुर्जन्मको आश्वासनले मलाइ मृत्यु भय बाट मुक्त गर्न सकेको छैन । जब शरीर कपड़ा जस्तो हो भने आत्माले शरीर छोडेर नयाँ शरीर धारण गर्दा पहिलेको कुराहरु स्मृतिमा रहदैन भने त्यस्को के अर्थ भयो र ?
पहिलो जिवनमा आत्मबोधको एउटा सहज अनुभव पछिल्लो जन्ममा भए त ठिकै थियो । त्यसैले ज्ञानी – अज्ञानी , धर्मात्मा – पापी , राजा – रंक , आस्तिक – नास्तिक आदि सबै मृत्यु बाट भयग्रस्त हुने कारण यो पनि होला। त्यसैले जब मरे पछी शरीर मात्र होइन स्मृति पनि मर्छ भने पुनर्जन्म हुनु र न हुनुमा के फरक पर्छ होला र ?
जिवनमा धेरै दुःखै दुःख र थोरै मात्र सुखको अनुभूति हुने भएको हुनाले शायद दुःख र कष्टको लामो काल न रहोस भनेर नै होला बाबा गोरखनाथले – “ हे ! जोगी मरो , मरन है मिठा “ भनेर मृत्युको बारेमा एउटा कबिता लेख्नु भएको रहेछ , जो महान दार्शनिक एवं संत( रजनिश ) आशोको एउटा “ मरो हे ! जोगी मरो “ भन्ने किताबमा मैले धेरै बर्ष अगाडी पढेको थिए। यो किताब मलाइ मेरा मित्र अरुणकुमार कर्णजी ले दिनु भएको थियो। त्यो कबितामा मैले जीवन भन्दा मृत्यु सुखमय हो भन्ने कुरा बुझे । दुःख होश हुनन्जेल सम्म न हो , मृत्युमा होश नै न रहने भए पनि दुःख भन्ने कुराको अनुभूति नै हुँदैन । त्यसैले यो दुनियाँका कतिपय रास्ट्रहरुले आत्म हत्या लाई कानुनी मान्यता दिएका होलान जस्तो मलाइ लाग्छ ।
अरु पनि आत्महत्या लाई मान्यता दिने कारणहरु होलान। खैर जे होला।
यो जिवनमा दुःखहरु बाट बचेर रहने कला यहि वर्तमान जिवनमा छ र मृत्यु पछी पनि जिवनको पुनरावृत्ती हुँदैन भन्ने कुराले केही क्षण मात्र मलाइ सन्तोष दिन्छ । हुनत अचेल केही बैज्ञानिकहरु पनि आत्मा सम्बन्धी कुराको शोध र खोजमा लागेका देखिन्छन् । बुद्धले , महाबिरले , हाम्रो उपनिषद्ले , हाम्रा ऋषि मुनिहरुले , योगिहरुले , संतहरुले पनि दुःख बाट मुक्त हुन सम्भव छ भनेको पाइन्छ । बस् ...... हिजोआज म त्यसैको खोज गर्दैछु। इति।